AmaProteas avele ayigxobe ngezimbadada inhliziyo, usale ungazi kuyahlwa noma kuyasa - Impempe
AmaProteas avele ayigxobe ngezimbadada inhliziyo, usale ungazi kuyahlwa noma kuyasa
Ukuba nabantwana kuyinto eyisibusiso esikhulu uma uzobathola ngesikhathi esikahle, uzokwazi nokubanakekela.
Abantu abangontanga yami bazongivumela ukuthi kumnandi futhi kwenza uziqhenye njengomzali, ukubona abantwana bakho bekhula ngendlela osuke ufisa ngayo.
Kuthi cosololo kakhulu uma ubabona benza izinto ezinhle osuke ubafundisa zona, bephumelela nasesikoleni. Lokhu kwenza kube lula kakhulu ukubathanda nokubenzela konke osuke unamandla okubenzela kona.
Nokho ngiyazi ukuthi kukhona abazali abakhala mihla namalanga ngezingane zabo, ngenxa yokuthi ziwuhlupho kubona nasemphakathini. Uthole ukuthi umzali uze aphimise amazwi abuhlungu athi: kodwa ngayizalelani ingane enje?
Uma umzali esekhuluma kanjalo ngengane kusuke sekukude ukuthi ishintshe, futhi namashwa asuke esezoyilandela yonke impilo yayo.
Lapha ke eNingizimu Afrika uma kukhulunywa ngezemidlalo izwe lethu lizele amaqembu esizwe ehlukene. Kukhona iqembu lesizwe lebhola lombhoxo (amaBhokobhoko), yiqembu lesizwe likanobhutshuzwayo (iBafana Bafana), yiqembu lesizwe lekhilikithi (amaProteas) namanye nje amaqembu esizwe afana nele-netball, hockey kanjalo neqembu elibunjwa abasubathi uma kunemiqhudelwano emikhulu.
Uyabona ngiyazi ukuthi ayaphoxa wonke amaqembu esizwe akuleli kodwa alikho elikushiya uphethwe wumzwangedwa ohambisana nenzululwane njengelekithi, amaProteas.
Leli qembu lesizwe lifana nengane ekhulele emafutheni, lapho kudliwa khona izambane likapondo kodwa evele ikhethe ukuyohlala emgwaqweni, ibe yiphara.
Uyazi phela kukhona izingane ezihlala emigwaqweni, ongaze uzihluphekele kanti ziphuma emakhaya antofontofo. Uthole ukuthi umuntu ukhululuma isiNgisi esomile esikhombisa kona ukuthi wake wafunda ezikoleni eziphezulu. Iphara lishaye isiNgisi sokucela u-R2 kudideke wena usemotweni.
AmaProteas acasula ngokuthi ayikho neyodwa into ayiswele njengoba evele asihlaze nje kubuka umhlaba wonke. Ngiyazi abaningi bazothi yini ngiphuma iqhubu namaProteas ngoba neBafana ike ibukise ngathi emazweni.
Mhlawumbe into eyenza ukuthi ngiyixolele iBafana ukuthi kukhona eyake yasithokozisa ngakho yize sekuyinto endala. Ukuwina kweBafana i-Africa Cup of Nations ngo-1996 kuyinto eyohlala ikhona emlandweni waseNingizimu Afrika.
Ngebhadi ngeke sikwazi ukusho okufanayo ngamaProteas. Leli qembu lekhilikithi lahluleka ukuwina iNdebe yoMhlaba ngisho isilethwe kuleli ngo-2003. Kunalokho lakhetha ukuphuma ekuseni emqhudelwani okuyinto eliyenza noma kudlalelwa kuphi. AmaProteas ayikho neyodwa indebe aseke ayiwina selokhu sabuyiselwa emidlalweni yamazwe ngo-2002.
Njengamanje amaProteas lawo abukisa ngathi njengoba evakashele ePakistan. Angikaze ngibone mina iqembu elishaya into ephansi kanje kwiTest uma libhetha. Ngesikhathi ngibuka imidlalo emibili yamaTest lapho iNingizimu Afrika ithelwe khona ngesibhaxu, bekungathi ngibuka abafana besikole nabo futhi abadlala kwi-Under 15.
Kwake kwathi angicishe ithelevishini noma ngiphume ngiyoshaywa umoya ngasolwandle ngibuka abadlali bethu bebhetha sengathi bayaqala ukudlala ikhilikithi.
Kwasiza kona ukuthi kwakumele ngabhale udaba lapha ku www.impempe.com, ukube kwakungenjalo ngangizoshiya phansi mina.
Ayasiphoxa amaProteas futhi uze ubone ukuthi awadeli ukusihlaza. Ngiyazi zikhona izinkinga kwiCricket South Africa (CSA) njengamanje kodwa lokhu akusho ukuthi abadlali abasuke begqoke imibala yeqembu lesizwe, bekhokhelwa eshisiwe imali le, bayobukisa ngathi emazweni.
Sishaywe sabhulelwa amasaka emidlalweni yamaTest futhi ngeke ngimangale uma kwenzeka okufanayo nakweyeT20.
Le ngane engamaProteas ayifuni nhlobo siziqhenye ngayo. Ngeke phela ingane uthi uyenzela yonke into bese yona ikhethe ukubukisa ngawe njengoba kwenza amaProteas.
Ngiyoyeka ukudumala ngamaProteas mhlazane awina indebe eyodwa nje ukuze okungasenani afane neBafana. Kuze kube yilelo langa ngiyobuka nje ngoba nakhu ngisebenza kodwa ayayigxoba inhliziyo yomuntu amaProteas.
Previous Previous post: I-CAF isinqume ukuwuhlehlisa oweWydad neChiefs
Next Next post: URizwan wePakistan uwenzele phansi amaProteas kwiT20 yokuqala